Ilhaan Cumar aabeheed taariikh nololeedkiisa: Nuur Cumar oo ku dhintay Mareykanka - BBC News Somali
Ilhaan Cumar aabeheed taariikh nololeedkiisa: Nuur Cumar oo ku dhintay Mareykanka
16 Juunyo 2020
Xigashada Sawirka, Ilhan Omar Twitter
Ilhan Cumar iyo Aabaheed Nuur Cumar
Allaha u naxariistee Nuur Cumar Maxamed oo ah xildhibaan Ilhaan Cumar aabaheed, ayaa ahaa nin muddo dheer soo shaqeeyay oo dadkii yaqaannay ay ku tilmaameen inuu ahaa nin farxaan ah oo dadku ay jecelyihiin.
Warka geerida aabaheed ayey Ilhaan Cumar soo dhigtay baraheeda bulshada ee Facebook-ga iyo Twitterka. Halkaas oo farriin kooban oo af-ingiriisi ah ay ku xaqiijisay in dunida uu ka tegay aabaheed.
Farriinta Ilhaan ayaa waxa ay u qorneyd sidatan "Innaa Lilaahi Wa innaa Ilayhi raajicuun. Dhab ahaantii Allaah ayaa na abuuray isagaana u laabanaynaa. Waa murugo iyo xanuun wayn inaan aabahay Nuur Cumar Maxamed sagootiyay. Ma jiraan kalmado aan ku qeexi karo waxa uu ii ahaa iyo waxa uu u ahaa dhammaan dadkii yaqaanay ee jeclaa."
Farrimahaas waxaa ka falceliyay kumannaan kun oo qof oo koontiyo ku kala leh barahaasi Facebook iyo Twitterka ee Ilhaan Cumar.
Ilhaan Cumar: "Trump waxaan dhihi lahaa, tiisa daryeelaa tu kale ku dara"
Maxay Ilhaan Cumar ka tiri dilka ninkii madowga ahaa?
Ilhaan Cumar oo gaartay guul siyaasadeed oo muhiim ah
Nuur Cumar Maxamed nin caynkee ah ayuu ahaa?
Nuur Cumar Maxamed waxa uu yaraantii wax ku soo bartay magaalada Muqdisho halkaas oo uu kaga baxay dugsigii Allaahida ee ay Masaaridu maamuli jireen.
Waxa uu markii dambe ku biiray ciidammada milateriga Soomaaliya, halkaas oo tababarro kala duwan loogu qaaday dalalka Masar iyo Ruushka. Markii dambe Nuur Cumar, waxa uu tababare u noqday ciidammadii milateriga Soomaaliya.
Cabdulle Jimcaale Jiisow, oo ah korneel hore uga tirsanaan jiray ciidammada milateriga Soomaaliya muddana ay saaxiibo ahaayeen marxuumka, ayaa BBCda uga warramay taariikhda Nuur Cumar oo kooban.
Cabdulle Jimcaale ayaa waxa uu Nuur ku tilmaamay inuu ahaa "Nin ahlu taqwa ah ayuu ahaa, nin ahlu diin ah ayuu ahaa. Nuur waxa uu ahaa nin dadku jecelyahay oo aad iyo aad bashaash u ah. Nuur waxa uu ahaa nin farxaan ah. Nuur wuxuu lahaa calaamado dadka Ilaahay jecelyahay ay leeyihiin." ayuu yiri Cabdulle Jimcaale.
Cabdulle Jimcaale Jiisow
"Nin sarkaal ah oo ciidammada Soomaaliya ka tirsanaan jiray ayuu ahaa, sidayada oo kale. Aqoontiisa kale waxa uu ahaa nin mutacalim ah oo waxbartay."
Cabdulle Jimcaale waxa uu sheegay in Nuur Cumar oo muddo tobannaan sanadood ah ay isyaqaanneen uu ahaa nin dedaal badan oo jecel inuu waxbarto.
Markii Soomaaliya ay dhibaatada ka dhacday ee la qaxayna Nuur Cumar iyo carruurtiisa oo ay ku jirto xildhibaan Ilhaan Cumar waxa ay dib u dejin ka heleen waddanka Mareykanka, halkaas oo uu waxbarashadiisii ka sii watay.
Cabdulle Jimcaale ayaa sheegay in ninka uu Nuur ahaa laga dheehan karo carruurta uu soo koriyay iyo sida ay bulshadooda wax u tareen: "Wax badan buu dalka iyo dadkaba u soo qabtay, oo waxaa lagu xasuusan doonaa dadka uu ka tegay oo gidigood mutacilimiin ahh. Waxaa ka mid ah Ilhaan Cumar oo xildhibaan ah, weliba hooyadood way dhimatay isagaa soo koriyay oo wax soo baray, Alaha u naxariistee.
Nuur Cumar Maxamed lama shaacin waqtiga la aasi doono.